"महान् Emerald" - होटल सेन्ट पीटर्सबर्ग मा: ठेगाना, समीक्षा, फोटो
रूस मा, आफ्नो जीवनमा कम्तिमा एक पटक उपस्थित जो भएन अचम्मको शहर, धेरै बस अनुचित छ। पक्कै पनि तिनीहरूलाई लागू हुन्छ, र सेन्ट पीटर्सबर्ग - एक धनी इतिहास र ठूलो सांस्कृतिक सम्पदाको संग शहर। कुनै आश्चर्य यो रूसी संघ को सांस्कृतिक राजधानी भनिन्छ कि।
यहाँ प्राप्त गर्छन दुनिया मा सबै भन्दा ठूलो देश को मात्र धेरै बासिन्दा गर्न। विभिन्न देशका पर्यटकहरु पक्कै बाटो रूस मार्फत जान्छ भने आफ्नो पर्यटक मार्गहरू कि शहर समावेश गरिनेछ।
सेन्ट पीटर्सबर्ग मात्र रोचक ठाउँ र सांस्कृतिक सम्पत्तिहरू विभिन्न abounds। यहाँ तपाईं बिल्कुल कुनै पनि समयमा काम बिना कुनै पनि मुद्रा को लागि बाँच्न ठाउँ पाउन सक्छन्। तपाईं "महान् Emerald" भ्रमण यदि उत्तरी राजधानी मा लक्जरी बिदा, उदाहरणका लागि प्राप्त गर्न सकिन्छ, - जो आफ्नो सबै सामान र सेवा सबैभन्दा मांग अतिथि अनुरूप हुनेछ5* होटल।
को Neva को सत्कार किनारा
यो कि सेन्ट पीटर्सबर्ग कुनै गोप्य - यो प्रेम पर्नु गर्न कठिन छ जो ठूलो शहर, हो। 300 भन्दा बढी वर्ष यसको इतिहास समयमा, त्यो रूसी साम्राज्यको राजधानी भ्रमण र देश को सबै भन्दा सुन्दर ठाउँ को रूपमा ख्याति हासिल गर्न समय भएको थियो। यो संसारको धेरै देशहरूमा को मान्छे यो शहर बारेमा थाहा छ, र निश्चित छ कि यो भ्रमण गरेका मनपराएका छन् थियो टिप्पण लायक छ।
यहाँ तपाईं शहर को मुख्य waterway छ जो राजसी Neva नदी, को quays साथ टहलने गर्न सक्नुहुन्छ, र ट्राम वा डुङ्गा मा मा सवारी। यो शहर को सबै ठाँउहरु पत्रुस समय हेर्न, यो किनभने तिनीहरूलाई धेरै छन्, एक भन्दा बढी सप्ताह आवश्यक हुनेछ। को कुटिया को सिक्ने मा, प्रदर्शनी धेरै कोठा मा प्रस्तुत गरिएको छ (आफ्नो नम्बर 350 भन्दा बढी), एक धेरै लामो समय लाग्नेछ।
त्यहाँ केही जो वास्तुकला विचार साँचो masterpieces छन् विभिन्न स्मारक, एक ठूलो संख्या हो। चर्च, mansions र महलों सबै प्रकारका सबै भन्दा राम्रो संसारको विभिन्न भागबाट यहाँ आउन जो आफ्नो क्षेत्रमा विशेषज्ञहरु धन्यवाद यहाँ देखियो।
धेरै पर्यटकहरु सेतो रात भनिन्छ अचम्मको प्राकृतिक घटना रमाइलो गर्न सेन्ट पीटर्सबर्ग आउन र हेर्न कसरी Neva भन्दा पुल को छोडपत्र।
सेन्ट पीटर्सबर्ग मा होटल पाउन
केही मानिसहरू एक दिनको लागि सेन्ट पीटर्सबर्ग आउँछन्। आखिर, मात्र एक धेरै अल्छी व्यक्ति यस शहर को सबै विशेष आकर्षण आफैलाई लागि स्थानीय सडकमा र अनुभव वरिपरि लक्षविना हिड्नु चाहनुहुन्छ छैन।
रूस को उत्तरी राजधानी प्रत्येक अतिथि त्यहाँ बस्ने सबै अवस्था हो, सबै भन्दा सुविधाजनक थियो। हस्टल उपलब्ध, होटल अतिथि यसको छत अन्तर्गत दिन वा रात को कुनै पनि समयमा स्वीकार। तिनीहरूमध्ये पनि सबैभन्दा भद्र पर्स लागि दुवै धेरै किफायती विकल्प, र एक धेरै आदरणीय घर, औसत माथि आय संग मान्छे प्राथमिकता दिन निश्चित छ जो।
होटल, शहर को मध्य क्षेत्र मा स्थित - एक यस्तो साँच्चै शाही रहन स्थानहरु "महान् Emerald" छ। निस्सन्देह, मूल्य ट्याग उच्च हो यो स्थान बस्ने, तर यति धेरै पर्यटकहरु यसलाई आफ्नो उत्कृष्ट सेवा र राम्रो स्थान को लागि चयन गर्नुहोस्।
यो महान् होटल
होटल (ग्रान्ड होटल) "Emerald" पहिले देखि नै टाढा 2003 मा सेन्ट पीटर्सबर्ग मा देखियो। यो ई एल Gerasimova नेतृत्व वास्तु स्टूडियो द्वारा डिजाइन एक विशेष परियोजना को आधार मा स्थापित भएको थियो। कुनै कम 10 भन्दा हजार वर्ग मीटर को एक क्षेत्र संग भवन निर्माण, समयमा मात्र समय नयाँ प्रविधि प्रयोग।
महान् होटल "Emerald" (सेन्ट पीटर्सबर्ग) यसको सुन्दर मोहरा, सुन्दर संगमरमर स्तम्भहरू संग सजाया छ जो गर्व हुन सक्छ। भित्र होटल अतिथि आधुनिक रुझान डिजाइन र क्लासिक शैली दुवै को विशिष्ट तत्व को एक अद्भुत मिश्रण आनन्द उठाउन सक्छौं।
यो पनि उल्लेख गर्नुपर्छ महान् होटल "Emerald", समीक्षा, सबै भन्दा भाग मात्र सकारात्मक छाप समावेश संसारको प्रेस्टिज होटल को एक अन्तर्राष्ट्रिय संघ को भाग जो कि। यसको संरचना मा कुल - संसारभरि विभिन्न शहर मा स्थित प्रथम वर्ग होटल को 1600 भन्दा सबै प्रकार। र यो मात्र रूसी होटल, यो प्रतिष्ठित समूह को सदस्य बन्न सक्छ जो छ।
"Emerald" मा कसले बसोबास गर्नुपर्छ
जो आउन ती प्राप्त उत्तरी राजधानी को सांस्कृतिक सम्पदाको थाह र यो भव्य शहर थाहा प्राप्त गर्न सकेसम्म धेरै चाहन्छ लागि यो स्थान सिद्ध छ। अतिथिहरूको सहज कोठा मा एक राम्रो आराम र स्थानीय रेस्टुरेन्ट मा स्वादिष्ट व्यञ्जन आनन्द उठाउन सक्छौं। पूर्ण आराम vacationers स्पा जटिल गर्न-सुसज्जित सक्षम हुनेछ, र टोन थप्न सबै मांसपेशीमा अनुमति सुसज्जित आधुनिक व्यायाम मिसिन संग विशाल फिटनेस केन्द्र।
यदि उत्तरी राजधानी भ्रमणको उद्देश्य आराम छैन, एक व्यापार यात्रा, महान् होटल "Emerald" (सेन्ट पीटर्सबर्ग) अतिथि कुशलतापूर्वक आफ्नो सबै महत्वपूर्ण घटनाहरू पूरा गर्न सक्षम हुनेछ जसमा एक उत्कृष्ट स्थान हो। आखिर, त्यहाँ कुनै पनि सेमिनार, सम्मेलन वा वार्ता लागि एक आदर्श मंच हुन् भनेर धेरै पूर्णतया सुसज्जित बैठक कोठा छन्।
को Neva नदी मा शहर को दिल मा होटल को सुविधाजनक स्थान महान् होटल "Emerald" (सेन्ट पीटर्सबर्ग) आउनुभएका हरेक अतिथि कदर हुनेछ। यसको स्थान को ठेगाना धेरै सरल छ: Suvorov एवेन्यू, घर 18 यो शहर राजमार्ग प्रसिद्ध Nevsky संभावना बाट टाढा छ र proletarian तानाशाही को क्षेत्र जडान क्षेत्र विद्रोह।
8 (812) 740-50-00: को पाठ्यक्रम, होटल र आफ्नो फोन नम्बर छन्। यसमा तपाईं आवास र अन्य होटल सेवाहरू सम्बन्धित कुनै पनि प्रश्न छ भने कुरा गर्न सक्नुहुन्छ।
कति चाँडो बन्न होटल "Emerald"
"महान् Emerald" उत्तरी राजधानी को दिल मा स्थित - होटल एकदम पर्यटकहरु कुनै पनि प्राप्त गर्न सजिलो छ। विमानस्थलमा "पुलकोभो" बाट यो जो कार द्वारा बारेमा आधा घण्टामा हटाउन सकिन्छ 25 मात्र किलोमिटर, द्वारा विभाजित छ। स्थानान्तरण, खैर, होटल सिधै आदेश गर्न सकिन्छ।
होटल मा Accommodating मास्को रेलवे स्टेशनमा सेन्ट पीटर्सबर्ग आइपुगे गर्नेहरूलाई सुविधाजनक छ। यदि सामान यहाँ तपाईं हिंड्न सक्छौं होटल देखि एक बिट: सबै बाटो 15 भन्दा कम मिनेट लाग्नेछ, र हामी परिवहन प्रयोग गर्नुहुन्छ भने, त्यसपछि सडक मात्र तीन मिनेट लाग्नेछ।
पनि ग्रैंड होटल "Emerald" (Suvorovskiy जनसंपर्क।, 18) "विद्रोह क्षेत्र" मेट्रो स्टेशन नजिकै स्थित, को पैदल 10 मिनेट लिन्छ जो देखि बाटो, र मेट्रो स्टेशन "Mayakovskaya", जो देखि यो एक सानो अब जान आवश्यक हुनेछ।
को सुरुचिपूर्ण आवास विकल्पहरू
शहर को यो केन्द्रीय होटल मा प्रस्तुत संख्या, सबैभन्दा मांग ग्राहकहरु हृदयमा जीत सक्षम हुनेछ। महान् होटल "Emerald" (सेन्ट पीटर्सबर्ग) मा पुग्दै, अतिथि खुशी केही धेरै वरिष्ठ र प्रभावशाली मान्छे बसोबास गर्न सक्षम हुनेछ जो कसरी छरितो कोठा र शानदार अपार्टमेन्ट, चयन गर्न सक्नुहुन्छ।
कुल, होटल मानक कोटीमा पर्छ भन्दा जो 90 उज्ज्वल कोठा, सुविधा। यस्तो आवास विकल्प 59 टुक्रा छन्। तिनीहरू सबै एक क्लासिक शैली र 20 वर्ग मीटर को एक क्षेत्र छ। अतिथिहरूको एक डबल बेड वा दुई जुम्ल्याहा बेड मा आराम गर्न सक्छन्।
उच्च कोठा, जो 17 टुक्रा छन्, 29 वर्ग मीटर छ जो मानक, को ठूलो क्षेत्र को श्रेणी फरक। यहाँ तपाईं एक अतिरिक्त बेड गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसैले कोठा यस प्रकारको बच्चाहरु संग परिवार को लागि सही छ।
प्रत्येक कोठा गरम फर्श, हावा-कंडीशनिंग, 40 इन्च को एक विकर्ण संग प्लाज्मा टिभी, सबै आवश्यक फर्नीचर, छिटो वाइफाइ र उत्कृष्ट बिस्तर संग एक स्नान छ।
उत्कृष्ट सुटहरू किसिम
महान् होटल "Emerald" (पत्रुस) मा ती जो लाभ छैन चाहन्छ भने आफ्नो सेवामा त्यहाँ 10 जूनियर सुइट्स हो, राम्रो कोठा मा बस रहन विशाल र परिष्कृत र। यी कोठा साम्राज्य शैलीमा सुसज्जित 35 वर्ग मीटर छन्, र एक विस्तृत डबल बेड छन्। बाथरूम Clarins ब्रान्ड कस्मेटिक्स किरा प्रदान गर्दछ, र केही कोठा स्थापित जक्यूजी।
लागि अवकाश वा काम अतिथि थप स्थान आवश्यक छ भने, होटल दुई-बेडरूम कार्यकारी सूट छ। को कोठा को एक टेबल, कुर्सियों र सहज असबाबवाला फर्नीचर को निर्वाचकगण एक सुरुचिपूर्ण भोजन क्षेत्र संग जीवित कोठा छ। दोस्रो कोठा - एक भव्य राजा-आकार बेड, एक अतिरिक्त ओछ्यान र अन्य आवश्यक सामान संग एक बेडरूम। त्यहाँ छुट्टै कोठा हलवे छ र बाथरूम एक जक्यूजी दावा र एक निजी सना प्रदान गर्दछ।
छैनन् accustomed गर्नेहरूलाई अप पनि व्यापार वा अवकाश यात्रा मा लक्जरी दिन, ग्रैंड होटल "Emerald" (सेन्ट पीटर्सबर्ग) शानदार कोठा राष्ट्रपति सुइट र शाही सुइट प्रदान गर्दछ। दुवै तपाईं पाहुनाहरूलाई यदि शाही दरबार रूपमा, यहाँ घरमा महसुस गर्न सक्छन् भन्ने सुनिश्चित गर्न आवश्यक सबै कुरा छ जो सुरुचिपूर्ण दुई बेडरूम, छन्। तिनीहरूले छुट्टै कोठा, सुरुचिपूर्ण बेडरूम र एक विशाल बैठक कोठा, सुसज्जित इटाली ले सहज र सुरुचिपूर्ण फर्नीचर संग छ। व्यक्तिगत सम्पत्तिमाथि र कोठा कागजातहरू को सुरक्षा र सुरक्षा को लागि डिजिटल Safes छ।
बाथरूम प्रदान गर्दछ तपाईं पनि संख्या बाहिर जाओ छैन, टोनलाई आउन आराम गर्न सक्छन् वा, जो मार्फत conversely, hydromassage, संग अति-आधुनिक शवर सानो घर दुवै लक्जरी सुइट्स प्रस्ताव। शाही सुइट पनि जीवित कोठा, वास्तविक स्तम्भ र क्रिस्टल को झाड र घरको छानो को आकार मा पनि ग्लास छत छन् जो को सजावट स्ट्राइकिङ्। यो पनि आउँदै जो मा तपाईं Neva मा शहर को भव्य दृश्य आनन्द उठाउन सक्छौं, दुई balconies छ।
के "Emerald" होटल मा समावेश गरिएको छ
को पाठ्यक्रम, होटल "Emerald" मा रहन निर्णय गरेका सेन्ट पीटर्सबर्ग सबै पाहुनाहरूको, यसलाई आवश्यक होटल को कोठा को लागत, साथै जानकारी यो के समावेश बारेमा थाहा छ। यसलाई तुरुन्तै उल्लेख पर्छ भनेर यस होटल मा रहन - एक सस्तो खुशी। पनि कम सिजन (लगभग अक्टोबर देखि अप्रिल गर्न) मा एक मानक कोठा को लागत बारे मा 12 हजार rubles हुनेछ। यो अवधि मा जूनियर सुइट, तपाईं लगभग 21 हजार rubles को लागि बसोबास गर्न सक्नुहुन्छ। अनि coolest सुइट्स लगभग 49 हजार rubles खर्च हुनेछ।
पैसा को लागि, अतिथि एक स्वादिष्ट र वैविध्यपूर्ण नास्ता आफ्नो काम को प्रारम्भिक बिहान घण्टामा "बुफे", एक स्विमिंग पूल र मनोरञ्जन क्षेत्र स्पा जटिल, साथै एक फिटनेस सेन्टर र सना सारा दिनमा लागि यहाँ प्रदान गरिएको छ आनन्द उठाउन सक्छौं।
एक सम्झौता मूल्य मा "Emerald" मा एक कोठा कसरी प्राप्त गर्ने?
सेन्ट पीटर्सबर्ग एक यात्रा तपाईं अग्रिम योजना भने, त्यसपछि तिनीहरूले धेरै आकर्षक मूल्यहरु मा शहर मा सबै भन्दा शानदार होटल को एक कदम एउटा ठूलो मौका छ। "महान् Emerald" - होटल भनेर निश्चित धेरै रुचि गर्नेछन् हो कि ठूलो छुट मूल्यहरु मा आफ्नो वेबसाइटमा कोठा बुक गर्न अनुमति दिन्छ। दिन को सबै भन्दा राम्रो सम्झौता पक्रने, तपाईंले केही हजार फाइदाको संग आवश्यक मिति मा इच्छित संख्या प्राप्त गर्न सक्छन्।
अतिथि लागि रूसी र युरोपेली भोजन को व्यञ्जन
यो लक्जरी होटल मा, "Emerald" को रूपमा, पाठ्यक्रम, तपाईं राम्रो मात्र खान सक्नुहुन्छ जहाँ छैन उत्कृष्ट रेस्टुरेन्ट र बारहरू छन्, तर पनि रोमान्टिक मिति वा व्यवसाय कुराकानी खर्च गर्न।
हरेक दिन "भर्साइल्लेज" भनिन्छ Atrium क्याफे व्यवस्थित छ, होटल अतिथि लागि नास्ता र खाने देखि तपाईं उत्कृष्ट भोजन, युरोपेली भोजन सम्बन्धित आनन्द उठाउन सक्छौं।
विदेशी अतिथि र रूसी संस्कृति को connoisseurs का लागि रेस्टुरा जसको डिजाइन पूर्णतया आफ्नो नाम अनुरूप छ "Gzhel" छ। यो तपाईं रूसी भोजन को सबै भन्दा राम्रो पाक masterpieces पुरानो व्यञ्जनहरु अनुसार मात्र उच्च गुणस्तरीय उत्पादन संग तयार आनन्द उठाउन सक्छौं कि यहाँ छ।
एक लबी पट्टी "Suvorov", होटल को भूमि तल छ जो - अतिथि यदि तिमी सिर्फ एक कप कफी, आफ्नो सेवाहरू छ त। त्यहाँ पनि होटल त्यहाँ सधैं ताजा मिठाई र पेस्ट्री छन् कारण जो, यसको आफ्नै Patisserie छ।
सबै काम र अवकाश लागि आवश्यक छ कि
लामो धेरै मानिसहरू को उत्तरी राजधानी मा हिँड्छ पछि आराम गर्न वा आफ्नो शरीर सफा गर्न चाहन्छु। कसैले आफै राम्रो आकारमा राख्न प्रयोग र अक्सर कस्मेटिक प्रक्रियाहरु सबै प्रकारका गर्न Resort। यस्तो अतिथि लागि, "Emerald" एक सुन्दर स्पा, जहाँ तपाईं उपचार को एक किसिम रमाइलो गर्न सक्छन् जो पनि सबैभन्दा nondescript आगन्तुक साँचो राजा वा राजकुमारी हुनेछ धन्यवाद छ, र एक निजी सौन्दर्य स्टूडियो "मखमली"।
मान्छे निरन्तर निश्चित व्यावसायिक प्रशिक्षकहरु संग एक फिटनेस सेन्टर भइरहेको मोल यहाँ र इटालियन कम्पनी बाट सबैभन्दा उन्नत खेल उपकरण लायक छ लागि, खेलकुद संलग्न छन् जो।
केही सुसज्जित बैठक कोठा - सेन्ट पीटर्सबर्ग शहर भने, अतिथि विशेष व्यापार उद्देश्यका लागि, आफ्नो सेवाहरू होटल मा भ्रमण त। होटल कर्मचारी खुसीसाथ तपाईं उच्चतम स्तर मा सबै समस्या समाधान गर्न मद्दत गर्नेछ, किनभने यसबारे एकदम सरल छ - एक संगोष्ठी, तिनीहरूलाई संगठित प्रस्तुति वा महत्त्वपूर्ण बैठक।
के अतिथि महान् होटल "Emerald" विचार
हाम्रो compatriots, तर पनि एकदम यस शहर मा आफ्नो रहन को लागि प्राय अन्य देशका अतिथि मात्र रोज्न ग्रैंड होटल "Emerald" (सेन्ट पीटर्सबर्ग)। यो5तारे होटल मा समीक्षा, निर्माण को सजावट र यहाँ प्रदान गरिएको छ कि सेवा बारे उत्साहित शब्दहरू पूरा। अतिथिहरूको स्थानीय कर्मचारी को एक चिल्लो र अत्यधिक कुशल काम, साथै स्वादिष्ट र ताजा नाश्ता भन्छन्।
तथापि, त्यस्तो सुन्दर ठाउँमा सबै हुन सक्दैन सिद्ध, र केही अतिथिहरूको गुनासो उनीहरूको बसाइ, सबैलाई यहाँ procuration को दिन मा छाप। कसैले पनि अग्रिम चेतावनी दिए के गरिएन होटल, मा तातो पानी आपूर्ति समस्याहरू सामना।
लगुना Mare4* (बुल्गारिया, Albena): होटल, सेवा, को विवरण
क्लब म्याजिक जीवन Jacaranda शाही5* (टर्की, साइड): फोटो र समीक्षा
स्वास्थ्य किनेको गर्न सकिँदैन: कार्लोवी मा sanatoriums र होटल Vary
होटल रोयल Jinene4* साउसे (साउसे, टुनिशिया) फोटो र समीक्षा
होटल कोम्पास3* (Albena, बुल्गेरिया) फोटो र समीक्षा
डन Joao होटल3* (उत्तर गोवा, Anjuna): विवरण, सेवा,
होटल Dessole टाइटैनिक एक्वा पार्क Resort: स्थान, समीक्षा, फोटो
गिनी fowl साधारण: वर्णन, नस्ल, प्रजनन
विन्डोज को आधारभूत। कसरी रीसायकल बिन मेटिएको फाइल पुन: प्राप्त गर्न?
कसरी कम्प्युटरमा मा एक पुस्तिका बनाउन
संसारको विभिन्न शहर मा Chernobyl वृद्धहरुको स्मारक
प्रवडा एक संचालक (सोची) हो। बहुदिल्ली चिकित्सा नैदानिक डेटाबेस
कलेजो सफाई, बुरा
कपाल हानिले मद्दत गर्दछ? प्रभावकारी उपकरणहरू
Fugue राज्य: कारण, लक्षण, रोग विवरण र निदान
कसरी म के: व्यंग्यात्मक - यो के हो?